Ndiyabulela kule chip abantu abaninzi abangaboniyo banokubona kwakhona | Iindaba zeGajethi
UJuan Luis Arboledas | | isibulali
Mva nje kubonakala ngathi imicimbi enxulumene nobukrelekrele bokuzenzela, iinethiwekhi ze-neural nayo yonke into enxulumene nekamva lokuqhubekeka kwedatha kunye nokugcinwa kubonakala kuphela kwento ekuthethwa ngayo. Inyani yile yokuba kukho amaqela amaninzi abaphandi abenze inkqubela phambili, nangona isenokungabonakali ngathi injalo, ngaphezulu kokumangalisa kunye nomtsalane, nangona inyani kukuba olu hlobo lwetekhnoloji luza kuthatha ixesha elide ukuba lufike, okanye ubuncinci olo luphawu olusinika thina.
Namhlanje ndifuna ukuthetha nawe malunga neprojekthi entsha enikezela ngaphezulu kweziphumo zokubetha, ngakumbi kuba iyakuvumela iimfama ziyabona kwakhona enkosi ekusebenziseni chip ekhethekileyo. Le projekthi yenziwa liqela labaphandi IYunivesithi yeRis eHouston (EUnited States) kwaye, ukuze isebenze njengoko kufanelekile, kufuneka ifakwe kwingqondo yomntu ofuna ukuyisebenzisa.
1 Le projekthi yeYunivesithi iRisiza ivumela abantu abangaboniyo ukuba baphinde babone
2 I-FlatScope sisixhobo esincinci esimele ukuba sifakwe kwingqondo yesigulana
3 Le projekthi ifumene nje inkxaso-mali ye-18,3 yezigidi ze-euro
Le projekthi yeYunivesithi iRisiza ivumela abantu abangaboniyo ukuba baphinde babone
Olunye lweempawu zokuqala eziza kuthi zibambe ingqalelo yakho kule projekthi bubungakanani obuncinci be-chip, ungayibona kanye kumfanekiso ophezulu wale post. Ngokusekwe ephepheni abapapashiweyo abanoxanduva lophuhliso lwayo, xelela ukuba ibhaptizwe ngokusesikweni ngegama lika I-FlatScope kwaye, kwiimvavanyo zokuqala ezifanayo, inokufikelela ukusombulula iingxaki ezithile ezinxulumene nokungaboni, isithulu kwanokukhubazeka.
Njengoko iqela labaphandi abasuka kwiYunivesithi yaseRice linxibelelana, le chip intsha isombulula uninzi lweengxaki abanazo bonke aba bantu bangaboniyo, ngakumbi ezinxulumene nezisombululo ezinokubakho kubumfama babo namhlanje, ezinjengokuba kufuneka babhenele ukufakelwa kwamehlo, apho, phakathi kwezinye izinto, kufuneka umnikeli, into engasayi kubakho mfuneko, ngokufanayo nokumiliselwa kwenye yezo zinto zinomtsalane. Amehlo e-bionic, Isisombululo uninzi lwabantu abachaphazelekayo kolu hlobo lweengxaki abanakho ukusifumana ngenxa yexabiso laso.
I-FlatScope sisixhobo esincinci esimele ukuba sifakwe kwingqondo yesigulana
Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, ngokobuqu ukusebenza kwe-chip efana nale ethi, khumbula, kufuneka ifakwe engqondweni yomntu oyifunayo. Kuyabonakala ukuba le chip isebenza njengemicroscope encinci eya kusebenza kwingqondo yomntu isebenze ngokungathi ibiluhlobo lwe modem ngomthamo, enkosi kuyilo lwawo olukhethekileyo, lwe ukubona nokuvuselela amandla engqondo ukuya kwisigidi se-neurons ngesantya se-1 GB ngomzuzwana.
Enkosi ngokuchanekileyo emsebenzini wokubeka esweni owenziwa yiFlatScope ngaphakathi kwengqondo yesigulana, iyakwazi Thumela ulwazi olunxulumene nembono ye-audiovisual yengqondo. Le yindlela enomdla ngayo le chip ekwaziyo ukubona izivamvo ezinokonakaliswa okanye zichaphazeleke luhlobo oluthile lwengxaki. Njengoko ubona, le chip ayisebenzi nje ukuze umntu ongaboniyo abone yonke into emngqongileyo kwakhona, kodwa nayo Inokukwazi ukusombulula iingxaki ezithile zokuva kunye nevumba.
Le projekthi ifumene nje inkxaso-mali ye-18,3 yezigidi ze-euro
Ngokuzimasa iingxelo ezenziwe ngu UFilipu Alvelda, omnye wabaphandi ababandakanyekayo kule projekthi:
Ngokwandisa ukubanakho konxibelelwano lwangaphakathi lwe-neural ukuya kwisibini esingaphezulu kwesigidi ngokuhambelana, injongo kukwenza ukuba kunxibelelane okutyebileyo ngeendlela ezimbini nengqondo.
Esi sisikhundla esibonakaliswe yile projekthi, ukuza kuthi ga ngoku, sinikezwe uhlahlo-lwabiwo mali olungekho ngaphantsi kwe-18,3 yezigidi zeedola, ethi ivele kwiArhente yoPhando yoPhuculo oluPhucukileyo lwee-Unidos, eyaziwa njenge IDARPA.
Más información: Ubergizmo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » isibulali » Ndiyabulela kule chip abantu abaninzi abangaboniyo banokubona kwakhona